Iingcebiso kunye namaqhinga okuthenga uMthi weKrisimesi oGqibeleleyo - Ukuhonjiswa Kwekrisimesi
Iingcebiso kunye namaqhinga okuthenga uMthi weKrisimesi oGqibeleleyo
Kukho iingcebiso ezimbalwa kunye namaqhinga ambalwa anokukunceda uthenge umthi weKrisimesi ofanelekileyo. Ezinye izinto oya kufuna ukuzijonga bubungakanani, izinto eziphathekayo, isitayela, iiwaranti, ukugcinwa kunye nezinye iinkcukacha.
Ukuthatha isigqibo kubungakanani obufanelekileyo
Vavanya apho ufuna ukuseta khona umthi weKrisimesi. Phula iteyiphu yokulinganisa kwaye ufumane ubude nobubanzi.
Indlela yokuhlobisa umthi omncinci weKrisimesi: Isikhokelo esilula
Iingcebiso ezilula zoKhuseleko lokuthenga
Iingcebiso kunye namaqhinga okuthenga eyona ilungileyo emva kweNtengiso yeKrisimesi
Buyintoni ubude bePhahla?
Ukuba awuyazi ukuba uphahla lwakho luphezulu kangakanani, lixesha lomnye umlinganiso. Ukuba igumbi oceba ukuseta kulo umthi wakho weKrisimesi unophahla oluphezulu, unokuthatha isigqibo sokuqhekeza kumthi omde.
Ngoku ka Iinduli zeBhalsam , Imithi yeKrisimesi eyenziweyo ineendawo eziphakamileyo eziqhelekileyo. Inkampani ibonelela ngesikhokelo esincedisayo sokumisela umthi weKrisimesi owenziweyo ofanelekileyo ekhaya lakho.
Ileta yombulelo ecaweni emva komngcwabo
Imithi yetafile: Ngaphantsi kwe-6 'ephezulu, olu lukhetho olufanelekileyo kwitafile yetafile, ngakumbi ukuba uhlala kwindawo encinci.
Ubungakanani bendlu: Uluhlu lwe-6 'ukuya ku-6.5 lulungele indlu okanye indlu encinci.
Umndilili wekhaya: I-7 'ukuya kwi-7'5 imithi zezona ndawo ziphakamileyo zidumileyo ezithengiselwa amakhaya aphakathi.
Amakhaya amakhulu: 9 'imithi ihlala ikhethelwa amakhaya anesilingi ephezulu.
Ukuphakama kwemigangatho emibini: Amakhaya anophahla olunemigangatho emibini evulekileyo anokuhlalisa imithi eli-10 ukuya kweli-15.
Izihloko zemithi kunye nobude bomthi
Kungenxa yokuba une-8 'isilingi ayithethi ukuba ufuna ukuthenga umthi weKrisimesi ongu-8' omde.
Ukuba une-topper esele ikho, njengengelosi okanye inkwenkwezi, ke ulinganise ukuphakama kwayo kwaye uthabathe ukuphakama kwesilingi ukuze ufumane ubude bomthi obunokuwusebenzisa.
Njengomgangatho, vumela ubuncinci i-10 ukuya kwi-12 'yokuhombisa.
Kwi-aesthetics, shiya ubuncinci intshi phakathi kwe-topper kunye nesilingi.
Emva kokuba uyazi ukuba ubude bomthi bungahlala njani, jonga ukuba ububanzi bomthi bunokuba bukhulu kangakanani. Ububanzi obufumanekayo kubandakanya, bugcwele, buncinci, bumxinwa kwaye buyicaba (ilungele iikona).
ICinco de mayo trivia imibuzo kunye neempendulo
Yongeza ii-intshi ezintathu ukuya kwezintandathu kumlinganiso wakho ukuze umthi ungabonakali uxinekile kwisithuba.
Indawo eyongezelelekileyo onayo ejikeleze umthi okanye kwicala ngalinye, kuya kuba lula ngakumbi ukuhombisa kwaye ubeke izipho ngaphantsi.
Uninzi lweenkampani zibonelela ngobubanzi bomthi. Qiniseka ukuba ujonga ukuba iyakulunga kwindawo yakho.
Uhlobo loMthi kunye nezixhobo
Ngoku ukuba uyazi ukuba yintoni ukuphakama nobubanzi obudingayo kumthi wakho weKrisimesi, ungakhetha uhlobo kunye nesitayile.
Inkampani nganye ineendlela ezithile zoyilo. Abanye bade bathengiswe. Ukhetho lwe iintlobo zemithi zibandakanya:
Umsonto: Amasebe asezantsi abanzi kwaye ajikwa phantsi ngeenaliti ezithambileyo.
Isiqhamo: Amasebe akhula aguqukile. Iinaliti zimfutshane, ziqinile kwaye zinesikwere.
Iphayini: Amasebe anyukela phezulu. Iinaliti zikhula ngokwamaqela aphuma kwindawo enye. Iipini ezimhlophe zinamaqoqo amahlanu enaliti ngelixa iipayini ezibomvu zinezibini.
PE okanye PVC Material
Inkampani yeSizwe yoMthi icacisa ukuba imithi ye-PE (Polyethylene) iyinyani kuba ibunjwe kumasebe omthi. I-PE ikwadityaniswa ne-PVC (Polyvinyl chloride) yokujonga okungaphaya. Ayizizo zonke iinkampani ezisebenzisa obu buchule. I-PE ibonelela nge- ubukhulu, imbonakalo yokwenyani . I-PVC inika ukujonga okuthe tyaba kwimilenze kwaye zihlala zibiza ngaphantsi kwe-PE.
Olunye uqwalaselo sisimbo somthi osithandayo.
Luhlaza: Umthi oluhlaza lolona hlobo loyilo lujongeka ngokwendalo.
Igcwele: Amasebe abonakala egutyungelwe likhephu. Isixa sekhephu siyahluka.
Ezinye iindlela zibandakanya:
indlela yokugquma oononkala ngothambiso
I-Tinsel / i-aluminium: Idume ngoo-1960tinsel umthiukonwabele ukubuya kwakhona. Iinaliti ezikhazimlayo zibonisa konke ukukhanya ingakumbi izibane zemithi.
Iintsiba: Abanye iintsiba imithi Iintsiba zokwenyani, ezinjengerhanisi ngelixa ezinye zenziwe ngeentsiba zokwenziwa. Oku kuza kuyo yonke imibala kunye neempawu ezimbalwa Iintsiba ezimenyezelayo . Uninzi lwezi ndawo ziphakame ngetafile, zihlala zingekho ngaphezulu kwe-30 'ukuphakama.
Ungaluvavanya uxinano lomthi weKrisimesi owenziwe ngumntu ngamacandelo esebe kunye nokubala kweencam.
Iingcebiso zesebe Faka iingcebiso ezincinci zefolokhwe ezinika ubalo oluphezulu lwencam. Ukuba umthi awunazo iingcebiso zefoloko, ubalo lwencam lusezantsi. Ngelixa iingcebiso zesebe kule meko zikhulu, uxinano luphantsi kuneengcebiso zefolokhwe.
Ukunyuka kwe ukubala incam Umthi uzalisa umthi kunye nokuhombisa okungaphezulu oya kuwuxhasa. Ukuhonjiswa ngeKrisimesi yoRhwebo icebisa ukubalwa kweencam ezithile ngokubonakala kakuhle ngokusekwe kubude bomthi.
6'5 ' : Ukubalwa kweencam ezilungileyo ngama-800 ukuya kuma-900.
7'5 ' Injongo ye-1200 ukuya kwi-1500 yokubala incam.
9'5 ' : Khangela ukubalwa kweencam ukususela ngo-2000 ukuya ku-3000.
12 ' : Ukubala okuhle kwincam kusuka ku-3500 ukuya ku-5000.
Amasebe aHinjiweyo okanye aHanjisiweyo
Ezi ndidi zimbini zokwakha isebe zibandakanya iihenjisi nezixhonyiweyo. IiNgxelo zabaThengi icebisa ukuba ujonge ukugcina imali, amasebe axhonyiweyo abiza ixabiso eliphantsi.
Amasebe kwakuxhomekeke zilungiswe ngokusisigxina kwipali yomthi kwaye zityhileke ngobukhulu obupheleleyo. Uninzi luza kumacandelo amathathu asuswayo.
Amasebe axhonyiweyo kufuneka abethelelwe kwipali yeziko kwaye asuswe xa ususa umthi.
Imithi enamasebe axhonyiweyo iya kufuna ngokwaneleyoindawo yokugcinayamalungu ahlukanisiweyo, ngesiqhelo ibhegi yokugcina uxande okanye ibin. Imithi esongelweyo edityanisiweyo ihambelana kwaye kulula ukuyigcina. Ezinye zilunga ngokufanelekileyo kwiingxowa ezijikelezileyo okanye ezinde.
I-Pre-Lit okanye i-Plain
Isigqibo sokugqibela ekufuneka usenzile ngaphambi kokuya kuhambo lokuya ezivenkileni kukuba ufuna ukuba izibane sele zifakiwe okanye ukuba ufuna ukwenza njaloyongeza izibane zakho. Unokukhetha izibane ezimhlophe okanye ezinemibala. Eminye imithi iza notshintsho lombala (ngakumbi kwimithi yefayibha). Nika ingqalelo ukuba zingaphi izibane ezifakiwe kunye nomthi okhanyisiweyo ngaphambi kokuba uqiniseke ukuba wanelisekile ngokukhanya. Ukuba uthenga izibane, kuyacetyiswa ukuba umthi weKrisimesi kufuneka ube nawoIzibane ezingama-300Lonke unyawo lokuphakama.
zeziphi iingqayi zamasoni ezixabisa imali
I-LED kunye ne-Incandescent
Kukho umahluko okhoyo kwi-LED kunye nezibane ze-incandescent ngaphaya kwezibane ze-LED ezivuthayo ezipholileyo. Ngokwemihlobiso yeKrisimesi yoRhwebo, uncedo lwezibane ze-incandescent ngumtya oya kuqhubeka ukhanya naxa iibhalbhu zitshile. Ngelixa ii-bulbs ze-LED zingatshi, ziyancipha ngaphezulu kwexesha lokuphila. Ukuba ibhalbhu isusiwe kwaye ayitshintshwanga, i-strand ayinakusebenza.
Ngaphambi kokuba uthenge
Iinkampani ezimbalwa, ezinjengeBalsam Hill, zibonelela ngeseti yesampulu onokuyithenga ngentlawulo yesiqhelo. Ikhithi inamasebe okuphela kuhlobo ngalunye lomthi inkampani ethengisa. Kukho ezinye izinto ezimbalwa ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuthenga.
Ezinye iinkampani zibonelela ngeziqinisekiso kumahlamvu, anje ngeminyaka emi-5 okanye iwaranti yeminyaka eli-10. Izibane zihlala ziza neziqinisekiso ezahlukileyo, ezinje ngewaranti yeminyaka emithathu yemithi esele ikhanyisiwe.
Imithi yeKrisimesi eyenziweyo iza neendawo zokuzibandakanya. Izitishi zentsimbi zomelele kuneeplastiki. Eminye imithi yemithi inokugqitywa kokumelana nokukhusela okuya kugcina ukuma kujongeke kutsha ixesha elide. Phambi kokuba uthenge, jonga ukuba ngaba isitendi sinenyawo zerabha ukuthintela ukutyibilika kunye nokugcina ukukrwela imigangatho.
Elona xesha lokuThenga
Kukho amaxesha ambalwa enyakeni apho unokuthi uthabathe izibonelelo ezilungileyo zemithi yeKrisimesi engeyiyo. Bhalisela uluhlu lwe-imeyile ukufumana isaziso sentengiso. Ixesha eliphumileyo lixesha elihle lokuthenga ngamaxabiso esaphulelo, nangona ezinye iinkampani ziphawula uluhlu lwempahla phakathi kuDisemba nangoJanuwari. Unokufumana nolondolozo olukhulu ngexesha loLwesihlanu oMnyama kunye neentengiso ezithile zokuthenga.
Ungawuthenga njani umthi weKrisimesi ogqibeleleyo
Ngokuthatha ixesha lokuqonda into onokuyilindela xa uthenga umthi weKrisimesi owenzileyo, ungazisebenzisa iingcebiso kunye namaqhinga. Olu lwazi luqinisekisa ukuba uyakugqibela ngomthi osapho lwakho oya kulonwabela kumaxesha amaninzi eKrisimesi.
Party Food Ideas Ikhadi Making Imitshato Imiboniso Yesilayidi Amanzi Park And Water Slides Imovie Iindlela
Entsha York Travel
Uyenza njani ingcuka ye-origami
Ucoceka njani igumbi lebhetri elonakalisiweyo
ziya phi izinja xa zisifa
imisebenzi enceda ukuhlawula ikholeji
ndifuna ukuba yintombi yakho
zenziwa phi iziginci zika michael kelly